गंगामाया न्याय माग्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगिनभने के हुन्छ ? – On Khabar
February 18, 2019 February 18, 2019 onkhabar	Comment(0)
गंगामाया अधिकारीले बनाइन् पासपोर्ट, न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्दै
यसअघि गंगामाया पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघ भवन पुगेकी थिइन् । अब उनी अन्तराष्ट्र्रिय स्तरमा पुगिनभने उनलाई कस्तो न्याय मिल्ला , तत्कालिन जनयुद्धका मुद्दाहरु उल्टाउने षड्यन्त्रपूर्वक त भैरहेको छैन ? प्रचण्ड, बाबुरामहरु यतिबेला यो विषयमा गम्भीर बनेका छन् । यदि मुद्दा लाग्यो भने नेपालको शान्तिप्रक्रिया धमिलिन सक्ने देखिन्छ ।
February 5, 2019 February 5, 2019 onkhabar
Spread the love अनखबर माघ २२, बुटवल चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा कुल ७ सय ४७ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। जसबाट ३ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ । ४ सय ८२ जना घाइते भएका छन् । अनुमानित आर्थिक क्षति २ करोड ७४ लाख २८ हजार भएको […]